UHugo: Izindaba, ukufakwa kanye nokusetshenziswa kwe-static site generator | Kusuka kuLinux
UHugo: Izindaba, ukufakwa kanye nokusetshenziswa kwe-static site generator
Uma kukhulunywa ngokwakhiwa kwamawebhusayithi anamuhla, nge ubuchwepheshe bamahhala / obuvulekile, ngoba akekho umuntu oyimfihlo ukuthi I-WordPress (WP) Uvame ukubhekwa njengeNkosi yaseShire. Noma, ukudala amawebhusayithi ashukumisayo noma amile. Noma kunjalo, kukhona njalo okunye ezinye izindlela ezinhle, ezikhululekile / ezivulekile noma zamahhala ngezinhloso ezithile, njengecala le- «Hugo ", ukuklama amawebhusayithi amile.
«Hugo ", ngamafuphi, ingenye esheshayo futhi ethandwa kakhulu izinhlaka zomhlaba ukwakha amawebhusayithi amile, okuyiwo futhi umthombo ovulekile futhi inikeza okumangalisayo isivinini nokuguquguquka lapho wenza intuthuko yakho kuso.
Kuyafuneka ukugqamisa kulabo abanentshisekelo, ukuthi kwezinye izikhathi esishicilele ngakho WP, nokuthi bangavakashela i- okuthunyelwe okuhlobene okugcina kusixhumanisi esilandelayo ekugcineni kwendima elandelayo:
"I-WP imahhala ukulanda nokusebenzisa i-CMS, kepha futhi iyinsizakalo enkulu yokubamba nokushicilela yamahhala ekhokhelwayo futhi ekhokhelwayo eyaziwa njengeWordPress.com ethola izibuyekezo kaningi. Ibuye ibe nesinye isizinda sodade esaziwa ngeWordPress.org futhi siyatholakala ngeSpanish. Futhi lokho kunokuqukethwe okuningiliziwe okuningiliziwe kolwazi nobuchwepheshe. " I-WordPress 5.4: Ukukhishwa Kokuqala Okukhulu kwe-2020
I-WordPress 5.4: Ukukhishwa Kokuqala Okukhulu kwe-2020
1 UHugo: Uhlaka olusheshayo emhlabeni
1.1 Uyini uHugo?
1.2 Imininingwane yamanje
UHugo: Uhlaka olusheshayo emhlabeni
Ngokusho kwe- Iwebhusayithi esemthethweni, ichazwe kafushane ngale ndlela elandelayo:
"Uhlaka olusheshayo emhlabeni lokwakha amawebhusayithi. I-Hugo ingomunye wemithombo evula imithombo evulekile yomthombo ovulekile. Ngejubane lakhe elimangalisayo nokuguquguquka, uHugo wenza amawebhusayithi okwakha abe mnandi futhi."
Ngenkathi, ku iwebhusayithi esemthethweni ku-GitHub, incazelo yayo eningiliziwe imi kanje:
"I-static HTML ne-CSS site builder ebhalwe kuGo. Kwenzelwe ukushesha, ukusebenziseka kalula, nokuhleleka. Kuthatha isiqondisi esinokuqukethwe namathempulethi bese sikuguqula kube iwebhusayithi egcwele ye-HTML. Kususelwa kumafayela weMarkdown angaphambili endaba yemethadatha, futhi ingaqhutshwa kunoma iyiphi inkomba. Lokhu kusebenza kahle kubasingathi okwabelwana ngabo kanye nezinye izinhlelo lapho ungenayo i-akhawunti eyilungelo. Nikeza iwebhusayithi ejwayelekile elingene ngokwesilinganiso sesekhondi. Ucezu ngalunye lokuqukethwe lunikeza cishe ku-1 millisecond. Idizayinelwe ukusebenza kahle nganoma yiluphi uhlobo lwewebhusayithi, kufaka phakathi amabhulogi, ukuwa, kanye nemibhalo."
Okokugcina kwakhe inguqulo yamanjeyiyona inombolo 0.80 ikhishwe ekugcineni kwe- ngonyaka we-2020. Inguqulo ukuthi phakathi kwezici eziningi ezintsha nezinguquko, kufaka phakathi ukuhambisana ne- I-Dart SASS, umsebenzi wembondela wesithombe nokuningi okuningi okungaziwa kokulandelayo isixhumanisi.
Kunikezwe, «Hugo " es isiteji sesiphambano, inezindlela ezahlukahlukene zokufaka ngokuya nge- Isistimu yokusebenza esetshenzisiwe, njengoba kungabonakala ngokuningiliziwe kokulandelayo isixhumanisi. Kodwa-ke, esifundweni sethu samacala noma sikwenze, sizolanda ifayela le- iphumelele "ngefomethi ye-.deb", ukufakwa okusheshayo nokulula ku-Respin yethu yangokwezifiso «Izimangaliso " kusekelwe «I-MX Linux ».
Ukuze senze lokhu, silanda leyo ehambelana nefayili ye- inombolo 0.80, futhi siyifaka ngomyalo olandelayo:
Uma sekufakiwe singakwazi hlola ukufakwa kwakho ngomyalo olandelayo womyalo:
Ukuze siyisebenzise, ​​kufanele setha iwebhusayithi. Ukuze wenze lokhu, singasebenzisa eyodwa kokuningi izifanekiso zetimu ezitholakalayo ngokulandelayo isixhumanisi, bese ulandela imiyalo yokusetha. Esifundweni sethu noma sizijwayeze, sizolanda ifayela le- Isifanekiso Sesihloko shayela Anatole.
Uma sesilandiwe siyayihlola, ngokwemiyalo enikezwe ngezansi:
Uma konke kusebenze kahle, kufanele sithole imiphumela elandelayo ye- Isiphequluli sewebhu ngokuphequlula i-URL elandelayo:
Ekugcineni, kuzohlala kuphela ukuqala hlela futhi uvumelanise / wenze ngokwezifiso isifanekiso bese uyishicilela ku- iwebhusayithi. Konke okunye, kusala ukujula kuphela Imibhalo esemthethweni kanye nalo Umhlahlandlela wokuqalisa ukuqhubeka nokufunda ukusebenzisa "Hugo".
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «Hugo», enye yezinhlaka ezisheshayo futhi ezithandwa kakhulu emhlabeni ukwakha amawebhusayithi amile, nawo ongumthombo ovulekile futhi onejubane elimangalisayo nokuguquguquka; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » UHugo: Izindaba, ukufakwa kanye nokusetshenziswa kwe-static site generator
I-Chrome 88 ifika nokuthuthuka kwezokuphepha, ithi sala kahle ku-Flash, FTP, Yosemite nokuningi
ICorellium imemezela ichweba layo le-Linux kuma-chip M1